M 'usic: this is how to better monetize your audience 💸 — 💌 WebTK — Your Ticket to WebTalK 🚀, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သတင်း & ပိုပြီး Invite 🔥
M 'usic: ဒါကသင်၏ပရိသတ်ကိုပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ💸
ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2019 by
M ‘usic: congratulations for being one of the top YouTube channels in မွန်ဂိုလီးယား! 💐💐💐
ဒါပေမယ့်သင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ သငျသညျအပေါ်ထိပ်လိုင်းများတ ဦး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် Webtalk revenue အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိရမည်။
Webtalk ၀ င်ငွေအားလုံး၏ ၀ င်ငွေ၏ 50% ကိုသင့်အားပြန်ပေးသည့်လူမှုမီဒီယာတွင်တော်လှန်ရေးဖြစ်သည်။ သင်၏နောက်လိုက်များကသင်၏ဗီဒီယိုကိုကြည့်သောအခါသင်ရရှိသည်။ သင့်ရဲ့ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ မည်သည့် ခင်ဗျားရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေတောင်မင်းရနေတုန်းပဲ။ နှင့် Webtalkသင်၏ရည်ညွှန်းချက်များသည်သင်၏စာအုပ်ဖြစ်လာသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အသက်အဘို့ သူတို့သည်သင်တို့အဘို့အဆင်ပြေ passive ဝင်ငွေ generate အဖြစ်။ မယုံကြည်သေးဘူးလား ကြည့်ပါ ဘယ်လောက်ဝင်ငွေရလဲ Webtalk.
သင်၏လက်ရှိနောက်လိုက်များ၏ 10% ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ပူးပေါင်း Webtalk သင်၏အသင်းနှင့်သင်၏ရည်ညွှန်းဖြစ်လာသည်။ ဒီလဟာဘယ်လောက်အထိဒေါ်လာဘယ်လောက်အထိကိုယ်စားပြုမလဲ။
အစောပိုင်းကသင်ပူးပေါင်းပြီးပရိသတ်ကိုစတင်တည်ဆောက်သည် Webtalkဝင်ငွေအလားအလာပိုများလေလေ ကောင်းကင်သည်ကန့်သတ်ချက် limit ဖြစ်သည်
အတွက်ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့် Webtalk Stars Teamသင်၏အားသာချက်မှာသင်၏ပထမတန်းစား VIP အထောက်အပံ့အပြင်သင်၏ပရိသတ်ကိုတိုးတက်စေရန်အခြားကိရိယာများစွာရရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်သင်၏အောင်မြင်မှုကိုရည်မှန်းထားသည်။ လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ကျော်ကြားသူများစွာတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်သည်ကောင်းသောကုမ္ပဏီဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်နှင့်ပတ်သက်။ မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါသလား Webtalk ငါတို့အဖွဲ့လား ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရသည်
* ကာကွယ်ထားသည့်အီးမေးလ် *
သင့်ကိုတွေ့ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ် Webtalk မကြာမီ သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးအသင်းအတွက်! 💛💚💙💜
Jacques-Louis Kreiss - Webtalk Stars Team တည်ထောင်သူ
သငျသညျကို Join လျှင်ဤအကျိုးခံစားခွင့်များမှာ Webtalk နှင့် Webtalk Stars Team
50% ၏ထိပ်ပေါ်မှာဝင်ငွေဝေစုကဆက်ပြောသည် Webtalk : ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပရဟိတလုပ်ငန်းကြှနျုပျတို့၏အသားတင်လစဉ်ဝင်ငွေ 50% ပြန်လည်ဖြန်ဝေ။ သင်သည်များစွာသောရည်ညွှန်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်ဤသည်တစ်ဦးတည်းသင်၏အသက်တာပြောင်းလဲနိုင်သည်
ဆက်ကပ်အပ်နှံထောက်ခံမှုနှင့်နည်းပြ ငါတို့အဖွဲ့ ၀ င်အားလုံးအတွက် - မင်းကိုအောင်မြင်အောင်ကူညီနိုင်မယ် Webtalk
ပရီမီယံ ressources ဖို့ Access ကို နှင့်မြှင့်တင်ရန်အတွင်းအကြံပေးချက်များ Webtalk
သီးသန့် tools များ အသုံးပြုခြင်းအတွက်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန် Webtalk နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်သောအဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်ရန်
တစ်ဦးကဆက်ကပ်အပ်နှံထားပေါ်တယ် မင်းကိုပြသဖို့နဲ့မင်းရဲ့အောက်ပါကိုတိုးတက်အောင်ကူညီနိုင်ဖို့ (မကြာမီလာမည်) ။
ပါဝင္ရန္ Webtalk ယခုနှင့်အတူ Webtalk Stars Team! (၁၀၀% အခမဲ့)
ဘာကြောင့် STARS ရွေးပါ Webtalk Stars Team?
ဒါငါတို့ပဲ Stars လက်ခံရရှိ:
VIP အထောက်အပံ့နှင့်တစ် ဦး -on-one နည်းပြ မင်းအောင်မြင်ဖို့မင်း Webtalk
သင့်ရဲ့ "အခွက်တဆယ်အေးဂျင့်" အတွင်းပိုင်း Webtalk သင်၏အလုပ်ကိုရှေ့သို့တိုးရန်သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းရှိစိတ်သဘောထားတူပညာရှင်များ၊ ခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်
50% ဝင်ငွေရှယ်ယာဆုကြေးငွေ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း ၀ င်အားလုံးအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်များစွာသောသူများနှင့်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ကြီးထွားစေရန်ကူညီသည်။ ဒါ့အပြင်ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၅% လှူဒါန်းမှုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာကြီးအတွက်သင်၏အထောက်အပံ့ကိုပြသရန်ကူညီလိမ့်မည်
ပရီမီယံရင်းမြစ်များနှင့်သီးသန့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်း မင်းရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရရန်နှင့်သင်၏နောက်လိုက်မှအလွန်အဆင်ပြေသော passive ဝင်ငွေကိုရရှိရန်ကူညီသည်
ပါဝင္ရန္ Webtalk ယခု VIP အဖြစ် Webtalk Stars Team! (၁၀၀% အခမဲ့)
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2019
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Youtubers အပေါ် Webtalk Tags: မွန်ဂိုလီးယား, YouTuber တ, Youtuber on Webtalk post navigation
Tsust Suvag: ဒါကပရိသတ်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းရအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲ
Wasabies: ဤနည်းသည်သင်၏ပရိသတ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောငွေကြေးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နည်း။ 💸
ပင်မစာမျက်နှာ - Youtubers အပေါ် Webtalk - M 'usic: ဒါကသင်၏ပရိသတ်ကိုပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ💸